पाँच मन्त्रीको हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री ओली ! को को हुन् ती पाँच मन्त्री ? - Sagarmatha Online News Portal
पाँच मन्त्रीको हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री ओली ! को को हुन् ती पाँच मन्त्री ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ जना मन्त्री फेर्नसक्ने संकेत देखाएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सुझावपछि प्रधानमनत्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको पुर्नगठनको संकेत देखाएका हुन् ।
वर्तमान केहि मन्त्रीहरुले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रुपमा पार्टीभित्र र बाहिर ट्रोल भएपछि ओलीले मन्त्रीहरुको हेरफेर गर्ने तयारीमा लागेको संकेत देखाएका हुन् । कुन कुन मन्त्रीलाई विदाई गर्ने र कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा ओलीले गृहकार्य शुरु गरिसकेका छन् । मन्त्रीको हेरफेर गर्ने विषयमा नेकपा शीर्ष तहका आफू निकट नेताहरुसँग ओलीले छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर, कसरी मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्ने भन्नेमा उनी अझै टुंगोमा पुगेका छैनन् ।
ओलीले कम्तिमा पाँच मन्त्रीलाई विदाई र छ मन्त्री नियुक्तिको तयारी गर्न लागेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनसहित ६ जना नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले पनि आफुलाई अनुकुल र कार्यसम्पादन राम्रो हुनेगरी मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । दुवै सदनबाट बजेट पारित भएलगत्तै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्ने तयारीशसुरु भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रियसभाबाट १२ र प्रतिनिधिसभाबाट १३ गते पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्रीले असार तेस्रो सातासम्म ‘क्याबिनेट मन्त्री’हरूलाई आफ्नो ‘वार्षिक कार्यप्रगति’ विवरण बुझाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । मन्त्रीहरुको कार्यप्रगति हेरेर मन्त्रीहरुलाई हटाउने वा राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ ।
ओलीले कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्री हटाउने भएमा उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ पहिलो निशानामा पर्नेछन् । उनीहरुले खास जनतामा सेवा डेलिभरी गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाई छ ।
Published On: ११ असार २०७६, बुधबार 1150पटक हेरिएको